Ajjeesanii Gadda Labsuun Aadaa Wayyaanee ti! – Baarentuu Gadaatin – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Ajjeesanii Gadda Labsuun Aadaa Wayyaanee ti! – Baarentuu Gadaatin
Ajjeesanii Gadda Labsuun Aadaa Wayyaanee ti
Wayyaaneen ajjeefatee kan gaddee fi naatoo ummataa qabdu fakkaattee boo’icha fakkeessii, boo’icha sobaa boo’aa jirti, boo’ichi akkasii ammoo qoosa dha. nama fixanii gadda labsuun lubbuu umataatti qoosuudha. Waliin dhahanii bara saamichaa fi ajjeechaa dheereeffachuudhaf tattaafachuudha. Kun oolee osoo hin bulle qabsoodhaan dhaabachuu qaba. Sirnchi haala kanaan itti fufnaan miidhaan kana caalu Oromoos ta’ee saboota biroo muudachuun waan hinn oolleedha. Miidhaan itti aanee dhufu ammoo kan ammaa caaluu mala, kanaafuu harka walqabatanii wayyaanee ofirraa ittisuu fi kuffisuun kan yeroon kennamuufii qabuu miti